कथा: जुना क्रमश : ३. – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
जिम्माल लक्ष्मीभक्त बाबुको अन्त्यन्त भक्त पनी थिए, चतुर थिए । उनको सरिर ज्यूढाल र व्यक्तित्व उच्च आकर्षकको थियो । उनलाई देखेर गाउका सबैले डराउथे पनि, सम्मान पनी गर्थे । आफ्नै घरका छ, छ भाइलाई मिलाएर राख्न पनि कम मुश्किलको काम थिएन । तर उनले सबैलाई एक एक काम दिएर यथास्थानमा राख्न सकेका थिए । गाउलेहरुको तत्कालिन अबस्थामा बिरोध गर्न सक्ने आँटै थिएन । तर पनी खासै असन्तोष पनि थिएनन् ।
बुढा जिम्माल भक्तिरामले जिम्माल छोरो लक्ष्मीभक्तलाइ हकारेपछि, जुनालाई भोलि पल्ट नै माइत पुर्याउने खटन पटन हुन थाल्यो । भाइ कान्छा चक्रपाणीलाइ जुनालाई भोलि नै माइत पुर्याएर आउनु’ भनेर अह्राए । केहि कोशेली बोकाएर लैजानु र अब म चार पांच बर्षपछि मात्रै जुनालाई लिन आउने छु, भन्न नबिर्से। गाउको जिम्माल त्यसमाथि आफ्नै दाजु आदेश त मान्नु नै थियो । चक्रपाणिले । दुइ दुइ वटा छोरा जन्माएर स्वास्नी मरेको हुनाले घरबार लथालिंग भएकोले, घरमा बुढा बा, घरमा पकाउने मान्छे छैन । केटाकेटी हुर्काउने, खेतिपाती घरधन्धाका काम यस्तो परिस्थितिमा उनलाई ठुलो मानसिक तनाव थियो । बौलाउन न हुने ! न भागेर नै सुख पाउने ! सबै अफ्ठ्यारो परिस्थिति सहनु सिवा कुनै उपाए पनी थिएन, उनलाई ।
उनि भाइहरुमा कोइ भन्दा कम थिएनन् । कर्मकाण्डी र संस्कृतको पढाइमा पाठशालामा पढन नपाए पनी घरमै पण्डित राखेर भक्तिरामले पढाएका थिए । पण्डितले भक्तिरामलाई भनेका थिए । यी तपाइको कान्छो छोरो तीक्ष्ण बुध्द्दिको छ । अब उस्को पढाइले उसलाई कर्मकाण्डमा त सजिलै उतार्छ । घरका लेनदेन र अड्डाका कानुनी निबेदन, दरखास्त र तमसुक आदि समेतमा उ पोख्त भैसकेको छ । यसलाई कतै राणाजीको बक्सिसबाट जागिर खान लायक भएको छ भनेर भक्तिरामलाई भनेपछि गुरुलाई दान दक्षिणा दिएर बिदा गरेका थिए । तर घरको परिस्थितिले उनलाई थिचेको थियो । समयले फेरी मलाइ राम्रो परिस्थितिमा ल्याउने छ भनेर पर्खनु सिवा अरु कुनै उपाए थिएन ।
चक्रपाणिले जुनालाई ससुरालीमा छोडनको लागि तयार भए । खुमा दिदीले बैनी जुनाको दुइ चुल्ठे कपाल कोरी पाटि गरि चिटिक्क पारिसकेकी थिइन् । चोली र घाघर लगाएकी, खुट्टामा चाँदीका पाउजु, हातमा राता पहेला छुरा र निधारमा रातो टिकी बिचमा टल्किने खाले, टाउकोका पातलो चुनरिले ढाकेकी, गोरी, चिट्ट परेको नाक नक्सा, असाध्यै राम्री देखिएकी थिइन् ।
खुमाले आफ्नो देवरलाई देखाउदै, उ तिम्रो सानो भिनाजुको हात नछोडिकन हिड्नु है, भने पछि, जुनालाई साच्चै मेरो बिहे होइनरछ भन्ने लाग्यो । दिदीले नै सानो भिनाजु भने पछि, उनलाई अलि ढुक्क भए जस्तो लाग्यो । बुबा भन्दै भक्तिराम लाई जुनाले निहुरि परेर ढोगिन र बिदा मागिन । एक जना भरियासंगै थियो । डोकामा केहि जुनाका कपडा थिए भने केहि खानेकुरा पाउर राखिएको थियो । अनि बाटामा खानको लागी ढकनी सालको पातको टपरीमा सिन्काले उनेर राखिएको थियो । भक्तिरामले भरियालाइ अह्राए नानि हिडन सकिनन् भने, बीच बिचमा बोक्नु है ।
चक्रपाणी बुध्दिजिवी त छदै थिए । वास्तबमा म जस्तो मान्छेले यस्तो उमेर अन्तरको बाल-बिबाह नगर्नु पर्ने थियो । आफुले बाउको र जिम्माल दाइको कुरो काटन सक्ने कुरो पनी थिएन । परिस्थिति त्यस्तै बनेर आयो । उनलाई लाग्थ्यो ठुलो गल्ति भो ? उनले मनमनै पश्चाताप पनी मानिरहेका थिए । यो बिबाह उल्ट्याउन मिल्ने भए उल्ट्याउन मन थियो । तर समाजले यस्तो कार्यलाई मान्यता त दिदैन थियो, इज्जतको कुरो हुन्थ्यो । अब जे होला ?
जुनालाइ उनकै माइतीमा छोडेर आउ । भोलि जे होला त्यहि टर्ला ! जुनाले उमेरकै कारणले अर्कैसंग भागेर जान पनि सक्छिन ? यस्तै मनमा कुरा खेलाउदै जुनालाई दाहिने हातले उनको देब्रेहात समातेर ससुराली तिर लागे । बाटाभरि चक्रपानिले जुनालाई साली भनेरै सम्बोधन गरे । जुनासंग केटा केटिपारामा तिमीले घरमा के काम गर्छेउ ? आमालाई काममा सघाउछेउ कि सघाउन्नौ ? तिमीलाई पढन आउछ कि आउन्न ? तिम्रो बैनीको कत्ति माया लाग्छ ? तिमि त अब त ठुली हुन् थालिकी छौ । घर धन्दामा आमालाई सहयोग गर्न पर्छ है ? बाबाले तिमीलाई कति माया गर्नु हुन्छ ? भनेर सोध्दै गए । जुनाले पनी सहजै चक्रपानीका प्रश्नको उत्तर दिदै, भिनाजु हजुरले मलाइ कति माया गर्नुहुन्छ है ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छिन । उनले गर्छु भन्दै निर्दोष बालसुलभ जिज्ञासालाइ उत्तर दिदै जुनाले लगाएको घाघर र चोली कत्ति तिमीलाई सुहाउदो रहेछ । भन्दै फेरी उनले जुना अहिले तिमि यत्ति राम्री छौ सानोमा त ! अझ ठुली हुँदा कस्ती देखिन्छेउ होला ! यिनै बालसुलभ बार्तालाभले बाटो काट्न सजिलो भैरहेको थियो । उल्लिखोला तरेर भिर बाटो हुदै बडियारको तीर तिरको बाटो उकालो ओरालो हुदै खैरेनी पुग्छन ।
अब भोकले अत्याइसकेको थियो । पानीको धारो भएको छेउमा ढुंगामा टुक्रुस्स बसी ढकनीको टपरी खोलेर, जुनालाई खुवान्छन । भरिया र आफुले अरनि खाइ चिसो पनि टन्न खाएर, ज्वांग हसरा हुदै ससुरालीतिरको बाटो लाग्छन । जुनेली रात थियो सम्साँझ पुग्न सकीएन, अलि ढीलो भयो । जुना बोकिन नमानेको हुनाले पनी ढिलो हुनु स्वभाविकै थियो । अलि भीरको बाटो लागेपछि जुनालाइ भरियाले डोकामा राखेर बोके, छिटो छिटो गरि ससुरालघरमा पुग्दा खाइवरि सुत्ने बेला भैसकेको थियो । मामलाबुढाले अब जिम्मालले कहिले दुरान फर्कान आउलान ठेगान छैन भनेर आजै आउने भन्ने लागेको थिएन । छोरी ज्वाई जतिखेर घर आए पनि स्वागत त गर्न पर्ने नै थियो । ज्वाईलाइ सम्मानका साथ भात भान्सा गराइ सकेपछि र संच बिसन्चका कुरा भए र सुत्ने ब्यबस्था गरियो । भरियालाइ बाहिर पालीमा, ज्वाइलाइ माथि कोठीमा सुत्न लगाइयो । मामला बाजेले आफ्नो छोरोलाइ हकार्दै ए बोधे र बैनी ज्वाइलाइ तेल लगाएर गोडा मालिस गर्दे भने । बोधे पनि लुलुक्क बैनिज्वाइलाइ तेल लगाउन कोठीमा छिरे । …………..